“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး… – PVTV Myanmar
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး…
· 8 months ago ·30 Comments
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အနေနဲ့က တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကြိုဆိုပါတယ် …”
…လက်ရှိစစ်အုပ်စုဟာ တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို အာမခံနိုင်လောက်တဲ့၊ အာမခံခွင့်ရှိတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကို (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ) ရပ်ဆိုင်းထားပါ။ အာဏာလုစစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး”
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
Like – 7.4K Share – 919
2021-05-16 at 9:10 PM
Aung Naing Tun says:
2021-05-16 at 9:17 PM
2021-05-16 at 9:27 PM
NUGကိုအပြည့်ဝထောက်ခံပါတယ် အခတ်ခဲ့ကြားက အမျိုးမျိုးကြိုးစားပေးတဲ့တွက်ပိုပီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ကျတော်တို့အားလုံးပြိုင်တူတွန်းရင်ရွှေ့မှာပါ။
2021-05-16 at 9:28 PM
Myo Myat says:
2021-05-16 at 9:29 PM
V/C background ကိုဂရုစိုက်ပါဆရာ။စခတွေခြေရာခံမိမှာစိုးလိုပါ။လေးစားလျှက်
2021-05-16 at 9:40 PM
Min Thuta says:
2021-05-16 at 9:47 PM
ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ စစ်တပ်အတွက်အထောက်အကူပြု ကုမ္ပဏီတွေပါ။ တရုတ်လိုပဲ အလုပ်သမားတွေကို ဖိအားပေးခိုင်းသလို အခွန်အားလုံးဆောင်ပြီး ခေတ်ပျက်စီးပွားရေး ငတ်ကီ့းကြလုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့လဲ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကြောင့် မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
2021-05-16 at 9:49 PM
2021-05-16 at 10:08 PM
သင့်ခယူး သင်ခယူ သင်ခယူ😬
Wai Phyo Oo says:
2021-05-16 at 10:09 PM
2021-05-16 at 11:47 PM
Pum Za Chin says:
2021-05-17 at 12:49 AM
2021-05-17 at 2:37 AM
2021-05-17 at 3:23 AM
See this is whatacompetent government minister looks like? Very knowledgeable and very well informed.
2021-05-17 at 5:10 AM
2021-05-17 at 7:27 AM
2021-05-17 at 10:04 AM
ခက်သ လီယာ says:
2021-05-17 at 10:59 AM
Kay Thu Sett says:
2021-05-17 at 12:35 PM
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်အခံတွေနဲ့ပါ ရှင်းပြထားတဲ့သဘောမှာ ရှင်းပါတယ်
2021-05-17 at 2:29 PM
Julie Lun says:
2021-05-17 at 3:14 PM
2021-05-17 at 5:01 PM
မနေ့က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောသွားသလို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို အားကောင်းခိုင်မာစေဖို့ အချိန်တော့ ပေးရမယ်ဆိုတာ နားလည်းပါတယ် ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလုပ်နေသူများ လည်းအထိုက်အလျှောက်တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမယ်မျှော်လင့်ပါတယ် အဓိက အရေးကြီးတာက ဗိုလ်မှုးဟိန်းသော်ဦးပြောသလို စစ်ပွဲတွေ အဆုံးဖြတ်ပေးမှာက လက်နက်ကြီးတွေ က ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာပြောခဲ့သလိုပဲ PDF ကို ခေတ်မှီ အဆင့်မြင့်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရေး အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးပါ အချိန်တွေကြာနေလိုတော့မဖြစ်ပါဘူး
အခုမန္တလေးမှာ စစ်ကောင်စီက အရမ်းတောင် ဖိအားမပေးရသေးဘူး မီးဖျက်မယ်လေးပြောရသေးတယ် မီတာ သွားဆောင်ကြသူတွေက ၆၅% ကျော်လောက် ရှိတယ် စစ်ကောင်စီက ဖိအားတောင်မပေးရသေးဘူး ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးသူတွေက သိပ္ပံ လမ်းမှာ အပြည့်နီးပါးပဲ (အဲ့နေရာလည်းဗုံးပေါက်သင့်ပြီ) ဆိုလိုတာက ပြည်သူတွေ မညီကြဘူး စစ်ကောင်စီကို ငွေကြေးအကြပ်အတည်းဖြစ်စေဖို့ မည်သည့်အခွန်မှ မဆောင်ပါနဲ့ဆိုတာ အများစု က ကိုယ့်ကိုကျိုးအတွက်ဘဲကြည့်ပြီးတော့
တိုက်ပွဲ ဝင်နေသူတွေက အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ၊ စီးပွားရေး တွေရင်းပြီး တိုက်ပွဲ ဝင်နေသူတွေရဲ့ မျက်နှာကိုတောင် မကြည့်ဘဲ အခွန်တွေပေးနေကြတာကြောင့် စစ်ကောင်စီက သက်ဆိုးရှည်နေမှာစိုးရတယ် စစ်ကောင်စီ သက်ဆိုးရှည်လေ ပြည်သူတွေ ပိုပြီးကြပ်တည်လေပဲ ဒါကြောင့် စစ်ရေးအရ ဒီမိုကရေစီ ကိုရယူဖို့နည်းလမ်းတစ်သာရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ ​အမြန်ဆုံးတိုက်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါ ဦးဆောင် ပေးပါ
Nann Thazin Phyo says:
2021-05-17 at 7:56 PM
2021-05-17 at 7:59 PM
Thin Thin Khine says:
Sapal Phyu says:
2021-05-21 at 2:08 PM
ထာဝရ လေးစားပါတယ် NUG
ကျန်းမာပါစေ စည်းလုံးညီညာအောင်ကြောင်းဖြာဘယ်သူခွဲခွဲဒို့မကွဲအမြဲစည်းလုံးမည်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ပြည်သူ့အာဏာသည်ပြပြည်သူထံမှဆင်းသက်သည်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှတိုင်ပြည်ကောင်းမည်ပြည်သူ့အစိုးရသည်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်သည်ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်သည်အမေစု ပြည်သူ့အားနဲ့ရယူမည်
U La Chit says:
Fight for Future_Music Video (May 17/2021)
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့…